Guri cidhiidhi ah
Jeedinta & Xadhiga
LASHAAD & XADGUDUB
Ku soo dhowow Narrowtex
Si aad u hesho ilaha internetka iyo cusbooneysiinta COVID-19 ee Koonfur Afrika, fadlan booqo SAcoronavirus.co.za
Waxaa la aasaasay 1969, Narrowtex wuxuu u dabaaldegayaa 50 sano oo soosaarid heer sare ah. Narrowtex waa soo saare iyo dhoofis tolmoonimo ku xiraya polyester, xarkaha polyester karbaash, xarkaha isku dhafan, xarkaha isku xidhan, xarkaha suunka, xargaha wershadaha iyo cajaladaha daahyada.
Laga soo bilaabo waayo-aragnimo iyo khibrad farsamo, oo ay weheliso heerar tayo sare leh, Narrowtex waxay u samaysay aasaas si wanaagsan loo aqoonsan yahay oo suuqyada maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah leh 55% oo ah mugga wax soo saarka ee loo qaybinayo Yurub, USA iyo Australia.
Iyadoo la raacayo ballanqaadkeenna ah inaan si joogto ah u hagaajino waxqabadka oo aan ugu sii jirno safka hore ee suuqyada dharka dhuuban, Narrowtex waxay haysaa aqoonsi soo socda:
Xarunta wax soo saarka ee Narrowtex ilaa shaybaarka waxaa loo adeegsadaa baaritaan joogto ah heerarka kala duwan ee wax soo saarka, iyadoo la hubinayo gaarsiinta joogtada ah ee alaabada.
Narrowtex sidoo kale waxay u isticmaashaa Shaybaarro la aqoonsan yahay oo loogu talagalay qalabka mashiinka silsiladaha leh waxayna leeyihiin shahaadooyin kala-soocid ah oo ay soo saartay sheybaarka la aqoonsan yahay. Haddii ay u baahdaan macaamiisha, Narrowtex ayaa bixin kara waxyaabaha soo socda:
Warbixinta Imtixaanka Dabaysha
COA - Shahaadada Falanqaynta
COC - Shahaadada Waxqabadka
Shahaadooyinkani waxay taxaan qeexitaanka macaamiisha iyo natiijooyinka imtixaanka dhabta ah.
Xarunta wax soo saarka ee Narrowtex iyo xafiiska ugu weyn waxay ku yaalliin Koonfur Afrika magaalada xasilloon ee bartamaha leh ee Estcourt, halkaas oo dadka degan ay ka soo baxaan shuruudaha shaqaalaha ee warshadda, iyagoo siinaya shaqooyin badan oo looga baahan yahay aagga. Kani wuxuu ka mid yahay barnaamijka mas'uuliyadda bulshada ee Narrowtex kaas oo sidoo kale ka caawiya dugsiyada maxalliga ah baahiyaha maaliyadeed ama kuwa kale ee gaarka ah.
Narrowtexku waa qayb ka mid ah Kooxda NTX taas oo qayb ka ah SA BIAS Industries Pty Ltd.
253 Wadada Loskop
Xidhmada Polyester Lashing
Xidhmada Polyester xirashada
Xidhmo / Xarago kulul
Astaamaha karbaashka iyo xargaha xargaha
Xallinta Xamuulka Xamuulka
Xuquuqda daabacaadda © 2020 | Narrowtex qayb ka mid ah Kooxda NTX oo ka kooban qayb ka mid ah SA BIAS Industries Pty Ltd.
Waxaan u adeegsanaa cookies si aan u hubino inaan ku siino khibrada ugu fiican websaydhkeena. Haddii aad sii waddo adeegsiga degelkan waxaan u qaadan doonnaa inaad na siisay oggolaanshahaaga.OgolaanshahaQaanuunka Arrimaha Khaaska ah